ကွန်ပျူတာမှသည်ကွန်ရက်ဆီသို့ - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
ကြာလေးလေ့လာလိုက်ရပါတယ်။ အားလုံးလိုလိုဟာ အင်တာနက်ကိုသုံးစွဲနေကြပေ
တော့ လေ့လာလိုက်စားဘို့အချိန်မရတာလဲပါချင်ပါကြမယ်။ ကျွန်တော် ဆက်လက်
ပြီးဆွေးနွေးသွားမှာပါ။ အခြေခံကျကျ တဆင့်ချင်းကို အသေးစိတ် ဆွေးနွေးသွားမှာ
ပါ။ အခန်းပေါင်း များစွာကနေ ရှူထောင့်မျိုးစုံနဲ့ ဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ
ကျွန်တော် ဒီအောက်ပါစာအုပ်များကိုကိုးကားပြီး ဆွေးနွေးသွားမှာပါ
၁) မျိုးသူရ ( ကွန်ပျူတာမှ ကွန်ယက်ဆီသို့ တည်ဆောက်အသုံးပြုခြင်းနှင့် အခြေခံသဘောတရားများ)
၂) ဇော်လင်း (Youth Computer ) ရေးသော ကွန်ပျူတာကွန်ရက်အကြောင်း လေ့လာမှုလမ်းညွှန်
၃) Интернет как это работает ( Алексадр Прохоров)
၄) Основы Работы в Интенете ( Александр Гаевский)
အမှတ်စဉ် ၁ နှင် ၂ ကတော့ မြန်မာပြည်မှ ညီအကိုမောင်နှမ များတို့တွင်
ရှိပြီးနေပါလိမ့်မယ်။ ပြည်ပတွင်ရောက်နေသော ညီအကိုမောင်နှမများတွင်တော့
Last edited by Ye Aung; 01-02-2008 at 09:03 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 71 ဦးတို့မှ Ye Aung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုစံငြိမ်း, ကိုမိန်နွယ်, ကွက်တိ, ချယ်ရီမင်း, စည်သူဇော်, ဆန်းမောင်, တီဘွား, နီထွန်းဦး, နီလာချစ်သူ, ဖယောင်း, မင်းမြတ်007, မျိုးမင်းငယ်အောင်, မျိုးဟန်ထက်, ရန်ရန်လင်း, လမင်းမျက်နှာ, ဝင်းကျော်ဦး, ဝင်းအောင်, သက်နိုင်, သက်ပိုင်ဦး, ဟန်နီသူသူ, အပယ်ခံ, အလတ်ကြီး, အလွမ်းမင်းသား, အနိုင်းမဲ့, ဇော်ဘုန်းလှိုင်, နေဦး, နောင် နောင်, မေဦးမွန်, မောင်စိန်ရွှေ, မောင်မိုးအောင်, မောင်သံသရာ, သောကမဲ့မိုးတိမ်, သေးသေးလေး, အောင်မိုးထွန်း, အောင်လံလေး, ၀င်းကျော်စိုး, ဖြိုးယံလေး, aungkohtat, aungphyo, aungzaw, Blackbrother, CICADA, goldstar, hellboy, hightechkey, Htun, kokhing, kokomaung.ko28, kyawswarhein, KznT, linthuraaung, lu soe, minthike, minthumon, moethout, Myanmar_Lycan, nayray, nayzaw3053, nightman, nyowin, Scorpion, smooth gut, Starfire, thanehtunaung, thura.it, thureinsoe, whiteman, yelinoo, zawyehtut, zo
Network ဘယ်ကစသလဲလို့မေးလာရင်တော့ networkအစကွန်ပျူတာကလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကွန်ပျူတာတွေမပေါ်ခင်တုန်းက network ဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူး နည်းနည်လေးထပ်ပြောရရင်ပထမဆုံးကွန်ပျူတာ တစ်လုံးကိုတီထွင်ခဲ့ချိန်ထိလည်း network ဆိုတာမရှိသေးပါဘူး ဒုတိယမြောက် ကွန်ပျူတာရယ်လို့ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကစပြီး တဖက်ကွန်ပျူတာ ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ တွေ folder တွေကို မိမိကွန်ပျူတာထဲမှာရှိနေသကဲ့သို့ ထိုင်ရာမထယူငင်အသုံးပြုနိုင်အောင်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့် တီထွင်ကြံဆခဲ့ကြတယ်။
သူ့ရဲ့သဘောကတော့ ရှင်းရှင်းလေးပါဘဲ တဖက်ကွန်ပျူတာထဲမှာ ရှိနေတဲ့ information တွေကို လူကိုယ်တိုင် သယ်ဆောင် ဖလှယ်စရာမလိုဘဲ ဒီဘက်ကွန်ပျူတာကနေထိုင်ရာမထ ဘဲ ယူနိုင်သုံးနိုင်ရင် အဲ့ဒါ network ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ information တွေတဖက်နှင့်တဖက် အပြန်အလှန်ဖလှယ်နိုင်အောင် ဘာတွေလိုအပ်သလဲ။ကဲ---ဆက်လက်လေ့လာကြရအောင်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 56 ဦးတို့မှ Ye Aung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုမိန်နွယ်, ကိုရင်အေးကျော်, ကွက်တိ, ချယ်ရီမင်း, နီထွန်းဦး, ဖယောင်း, ဗညားလေး, မင်းမြတ်007, မိုးမိုး, မျိုးမင်းငယ်အောင်, ရန်ရန်လင်း, လမင်းမျက်နှာ, သက်နိုင်, အနိုင်းမဲ့, နေဦး, နောင် နောင်, မောင်စန်းယု, မောင်စိန်ရွှေ, မောင်မိုးအောင်, မောင်သံသရာ, မောင်ဝင်း, သောကမဲ့မိုးတိမ်, သေးသေးလေး, အောင်မင်းကို, အောင်မိုးထွန်း, အောင်လံလေး, မြတ်လေးငုံ, ၀င်းကျော်စိုး, aries, aungkohtat, aungphyo, Blackbrother, CICADA, hellboy, hightechkey, hninn nu, khinmarsan, kokhing, kokomaung.ko28, linthuraaung, minthike, moh, naynayz, nayzaw3053, nnkpol, nyowin, Scorpion, smooth gut, Starfire, thandaroo, thanehtunaung, thura.it, whiteman, yelinoo, zo
Network Medium ကြားခံဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများ
Network Medium ဆိုတာ ကွန်ပျူတာတွေကို ကွန်ရက်ရိုက်တဲ့အခါ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနှင့်တစ်လုံးကိုကြားခံချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြားခံပစ္စည်းဟာ
Network cable ကြိုးတွေဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတို့ဟာ Metallic Cable ဒါမှမဟုတ်Fiber Optic Cable တို့
ဖြစ်ကြပါတယ်။Metallic Cable ဆိုတာ Coaxial Cable နှင့် တယ်လီဖုန်းကြိုးတို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။
အဲ့ဒီအပြင်ခုနောက်ပိုင်းတွင် ကြိုးတွေကို အသုံးမပြု တော့ဘဲ Wireless ဆိုတဲ့ ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်
တွေကိုလည်း ချိတ်ဆက် အသုံးပြု လာကြပါတယ်။နောက်တစ်ခုက ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနှင့်တစ်လုံး
က Network ကြိုးနှင့် ချိတ်ဆက်တယ်ဆိုပေမယ့် ဒီကြိုးတွေ လာရောက်တပ်ဖို့ကကွန်ပျူတာမှာ
NIC ဆိုတဲ့ Network Interface Card (Nerwork Card) တော့ရှိ ရမှာပေါ့ ။ ဒီတော့ ကွန်ပျူတာ
တစ်လုံးနှင့်တစ်လုံးသို့ Network Card တွေ Network ကြိုးတွေ Network ခေါင်းတွေ စတဲ့
Network Medium တွေကို အသုံးပြု ပြီး Data တွေကို Carries လုပ်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 46 ဦးတို့မှ Ye Aung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုစံငြိမ်း, ကိုမိန်နွယ်, ကွက်တိ, ဆန်းမောင်, နီထွန်းဦး, ဖန်ဆင်းရှင်, ဖယောင်း, မင်းမြတ်007, မျိုးမင်းငယ်အောင်, ရန်ရန်လင်း, လမင်းမျက်နှာ, ဝင်းကျော်ဦး, သက်နိုင်, နေမင်းဇွဲမာန်, နေဦး, နောင် နောင်, မောင်စိန်ရွှေ, မောင်သံသရာ, အောင်မင်းကို, အောင်မိုးထွန်း, အောင်လံလေး, မြတ်လေးငုံ, aries, aungphyo, AZM, Blackbrother, carnationflower, CICADA, hellboy, hightechkey, hninn nu, khinmarsan, kokhing, kokomaung.ko28, linthuraaung, minthike, nayzaw3053, nyowin, pyaephyowin21522, Scorpion, smooth gut, thanehtunaung, thura.it, yelinoo, zo
18-01-2008, 04:36 PM
Network Protocols ဆက်သွယ်ရေးအရာရှိ
ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးနှင့်တစ်လုံး Network Card တွေစိုက် Network ကြိုးတွေချိတ် လုပ်လိုက်ရုံနဲ့ Network တစ်ခုဖြစ်မလာပါဘူးcomputer တစ်လုံး communicate ဖြစ်ဖို့ရာ အခြားကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့ ချိတ်ဆက်မိသွားဘို့ဆိုတာ rule လေးတစ်ခုလောက် တော့လိုတယ်နော်။ဆိုတာ အခြားတစ်ဘက်က ပြောလိုက်တာကို တစ်ဖက်က ဘယ်လိုဘာသာပြန်လဲပေါ့ နောက်ပြီး တစ်ဘက်နဲ့တစ်ဘက် ဘယ်လို initiate လုပ်ကြလဲပေါ့ ဒီလို Network တစ်ခုမှာကွန်ပျူတာတွေ တစ်လုံးနှင့်တစ်လုံးကြားCommunicate လုပ်ဖို့က ဥပဒေသ တွေ rule တွေပါတဲ့ software တစ်ခုလိုသဗျ။ ဒါဟာဘာလဲဆိုတော့ Protocols ဘဲပေါ့။ Protocols ဆိုတာ ကCommunicate ကိုထိန်းချူပ်ပေးတဲ့ Software တစ်ခု ဖြစ်တယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 39 ဦးတို့မှ Ye Aung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုမိန်နွယ်, ကွက်တိ, ဆန်းမောင်, နီထွန်းဦး, ဖယောင်း, လမင်းမျက်နှာ, ဝင်းကျော်ဦး, သက်နိုင်, အနိုင်းမဲ့, နေဦး, နောင် နောင်, မောင်စိန်ရွှေ, မောင်သံသရာ, အောင်မိုးထွန်း, အောင်လံလေး, မြတ်လေးငုံ, ၀င်းကျော်စိုး, aungkohtat, aungphyo, AZM, Blackbrother, CICADA, hellboy, hightechkey, hninn nu, khinmarsan, kokhing, kokomaung.ko28, linthuraaung, minthike, nayzaw3053, nyowin, pyaephyowin21522, Scorpion, smooth gut, thanehtunaung, thura.it, waihtutpai, yelinoo
ဒီတော့ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနှင့်တစ်လုံး ကြိုးလေးချိတ်ဆက်ထားရုံ Network Card တွေ တပ်ထားရုံနဲ့မပြီး ဘဲ Communicate ဖြစ်မြောက်ဘို့အတွက် Protocol ဆိုတာလိုအပ်တယ်။
(၃) IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange /Sequence Packets Exchange ) စသည်
တို့ဖြစ်ကြတယ်။ တစ်ခြား သုံးတာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။
ကိုမိန်နွယ်, ကွက်တိ, ဆန်းမောင်, တီဘွား, နီထွန်းဦး, ဖယောင်း, မျိုးမင်းငယ်အောင်, လမင်းမျက်နှာ, လူပျင်း, ဝင်းကျော်ဦး, သက်နိုင်, နေဦး, နောင် နောင်, မောင်သံသရာ, အောင်မိုးထွန်း, အောင်လံလေး, ၀င်းကျော်စိုး, aungkohtat, aungphyo, AZM, Blackbrother, CICADA, hellboy, hightechkey, hninn nu, khinmarsan, kokhing, kokomaung.ko28, linthuraaung, minthike, Myanmar_Lycan, nayzaw3053, nyowin, Scorpion, smooth gut, thanehtunaung, thura.it, yelinoo
Network Software ထိန်းချုပ်မည့်စနစ်
Network ကိုကွန်ပျူတာတစ်လုံးနှင့်တစ်လုံးချိတ်ဆက်ထားရုံနဲ့ NIC card တွေတပ်ဆင်ထားရုံနဲ့ နောက် Protocol လေးတင်ထားရုံနဲ့ တင်မရပါဘူး ။ကိုယ်တပ်ဆင်မယ့် Network က Client / Sever Network မျိုး ဆိုရင်ပေါ့။ အဲ့ဒီလိုClient / Sever Network တွေမှာဆိုရင် Network ကြိုးတွေNetwork Card တွေ Network Protocol တွေနဲ့တင်မလုံလောက်တော့ပါဘူး။Network Software ဆိုတာကြီးကလဲလိုလာပြန်ပါတယ်။ အဲ့ဒီNetwork Software ဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူး။ Network Operation System (NOS) ပါဘဲ။ဒီ NOS ဟာ ဘယ်ကွန်ပျူတာ၊ဘယ်အသုံးပြုသူ User ကတော့ဖြင့် Network ရဲ့ဘယ် Resoures ကို အသုံးပြုမယ် စတာတွေကို ထိန်းချုပ်ပေးရပါတယ်။ အဲ့ဒီ NOS တွေက တော့ဥပမာအားဖြင့် Microsoft Windows NT,Microsoft Windows Server 2003 စတာတွေပေါ့ ။အဲ့ဒီထဲမှာမှ Windows NT Server ,Windows Server 2003 ,Novell Netware 5.1 တို့ဟာ Serverversion တွေဖြစ်ကြပြီး တဖက်က Client တွေကတော့ Microsoft Windows NT Workstations, Windows 2000 Professional ,Window XP, တို့ဖြစ်နိုင်
အောက်ပါအသင်းဝင် 38 ဦးတို့မှ Ye Aung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကွက်တိ, ဆန်းမောင်, နီထွန်းဦး, နီလာချစ်သူ, ဖယောင်း, မိုးမိုး, လမင်းမျက်နှာ, ဝင်းကျော်ဦး, သက်နိုင်, အနိုင်းမဲ့, နေဦး, နောင် နောင်, မောင်သံသရာ, အောင်မိုးထွန်း, အောင်လံလေး, မြတ်လေးငုံ, ၀င်းကျော်စိုး, aungkohtat, aungphyo, CICADA, hellboy, hightechkey, hninn nu, kaungpyae, khinmarsan, kokhing, kokomaung.ko28, linthuraaung, minthike, Myanmar_Lycan, nayzaw3053, nyowin, pyaephyowin21522, Scorpion, smooth gut, thanehtunaung, yelinoo
Network Services ကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှု
Network Services ဆိုတာ ကွန်ရက်က လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေ ဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒါတွေကတော့
၁) File Services
၂) Print Services
၃) Communication Services
၄) Electronic Mail တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 37 ဦးတို့မှ Ye Aung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကွက်တိ, ဆန်းမောင်, နီထွန်းဦး, ဖန်ဆင်းရှင်, ဖယောင်း, ရှင်းလေး, လမင်းမျက်နှာ, ဝင်းကျော်ဦး, သက်နိုင်, နေမင်းဇွဲမာန်, နေဦး, နောင် နောင်, မောင်သံသရာ, အောင်မိုးထွန်း, အောင်လံလေး, မြတ်လေးငုံ, ၀င်းကျော်စိုး, aungkohtat, aungphyo, AZM, CICADA, hellboy, hightechkey, hninn nu, Htain, kaungpyae, kokhing, linthuraaung, minthike, nayzaw3053, nyowin, pyaephyowin21522, Scorpion, smooth gut, thanehtunaung, yanhtunlay
ပြန်စာ - ကွန်ပျူတာမှသည်ကွန်ရက်ဆီသို့
ကောင်းလိုက်တဲ့ အရေးအသားတွေ။ စနစ်တကျနဲ့ အခြေခံကစပြီး လေ့လာချင်သူတွေ ၊ အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ရမှာ ပျင်းနေသူတွေကို အထောက်အကူဖြစ်စေတာပဲ။ ဒါနဲ့.... မင်းစေတနာကောင်းတာတော့ သိပါတယ်။ မင်းက ဆေးရုံကတောင် ဆင်းရသေးတာမဟုတ်ဘူး။ ကောင်းကောင်းနားပါဦး။ နည်းနည်းစီရေးပေါ့။ မင်းကို ဒီက ညီအကိုမောင်နှမတွေက နေမြန်မြန်ကောင်းဖို့ ဆုတောင်းပေးပါလိမ့်မယ်။ ကျန်းမာရေးက အဓိက သူငယ်ချင်းရေ..။ အမြန်ဆုံး ကျန်းမာပြီး ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေကွာ... ။
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ Ye Naung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နီထွန်းဦး, ဖန်ဆင်းရှင်, ဝင်းကျော်ဦး, သက်တန့်, သက်ပိုင်ဦး, လေပြေညင်း, naynayz, thanehtunaung
18-01-2008, 10:07 PM
၅)	Network layer
Network layer ကတော့မတူညီတဲ့ Network တွေပေါ်မှာရှိကြတဲ့ ကွန်ပျူတာအချင်းချင်း Communications ဖြစ်စေဘို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ Functions တွေသတ်မှတ်ပေးခြင်းကိုပံ့ပိုးပါတယ်။။၎င်းရဲ့ Function တွေအထဲက ဦးစွာအတိုချုပ်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်-
-	ကွန်ရက်ပေါ်မှာ Data Packets များကိုလမ်းကြောင်းလွှဲခြင်း(Routing) နှင့် Logical Addressing တာဝန်
-	ကွန်ရက်ပေါ်မှ Nodes နှစ်ခုအကြား Connection နဲ့ Path တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းနှင့်ဖြုတ်ချခြင်းဆိုသည့်တာဝန်
-	Connections များကို Reset လုပ်ခြင်း ၊data များကို ထုတ်လွှတ်ခြင်း နှင့်သယ်ဆောင်ခြင်းရရှိလာသည့် Data များကို Confirm လုပ်ခြင်းစသည့်တာဝန်များကို ၎င်း Network layer မှ ထမ်းဆောင်ရပါသည်။
Network အလွှာဆိုတဲ့ ၃ လွှာမြောက်အလွှာဟာ Signal များကို Addressing ဆိုတဲ့ လိပ်စာသတ်မှတ်ပေးခြင်း
Physical Address များသတ်မှတ်ပေးခြင်း၊Logical Address များကိုသတ်မှတ်ပေးခြင်းတို့ကိုလုပ်ဆောင်ရပါတယ်။နောက်ပြီး
Layer ဟာ ဖြစ်တည်ရာကနေ ဦးတည်ရာComputer ဆီသွားရာလမ်းကြောင်း (Routing) ကိုလည်းသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။
Network တွင်းလမ်းကြောင်း ကျပ်တည်းမှု ၊ပိတ်ဆို့မှုစတဲ့ Traffic ပြဿနာတွေကိုလည်း ၎င်း Network layer မှ Manage လုပ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာက Packet Sequencing ပါ။ ပေးပို့သူနဲ့ လက်ခံသူ ကြား Error Detection ပြုလုပ်ခြင်း Congestion ဆိုသည့် လမ်းကြောင်းကျပ်တည်းမှုကိုထိန်းချုပ်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ကြရပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် မတူညီတဲ့Network Medium ပေါ်မှာ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးက ပို့လိုက်တဲ့ Data ပမာဏ ဟာကြီးနေလို့ပို့မနိုင်ဘူးဆိုရင် ဒီ Network layer ဟာ ၎င်း data ကို အပိုင်းငယ်လေးအဖြစ်ပြုလုပ်ပြီးပို့လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ ဟိုဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါ Network layer က ၎င်းအပိုင်းငယ်ကလေးတွေကိုပြန်ပေါင်းလိုက်ပါတယ်။ TCP/IP Protocol ကိုအခြေပြုထားတဲ့ ကွန်ရက်တွေမှာဆိုရင် IP Address ,Network Address တွေနဲ့ IP Routers တွေဟာ ၎င်း Network layer မှာအလုပ်လုပ်ကြတယ်။
Network layer Protocol ရဲ့အဓိကလုပ်ဆောင်မှုကတော့ addressing နှင့် routing တို့ဖြစ်ပါတယ်။ addressing ဆိုတာကတော့ device (ကွန်ပျူတာ) တစ်ခုကို network ထဲမှ အခြားမည်သည့်device နှင့်မှမတူနိုင်တဲ့ address number တစ်ခုသတ်မှတ်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။device တစ်ခုမှာဆိုရင် address နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။ IP address (Logical address) နှင့် MAC address တို့ဖြစ်ပါတယ်။
NIC အားလုံးတို့မှာ MAC address လို့ခေါ်တဲ့တကယ့် physical address တစ်ခုစီရှိကြတယ်ဆိုတာသိပြီးသားဖြစ်
ပါလိမ့်မယ်။ MAC address ကိုစက်ရုံမှာ NIC ထုတ်စဉ်ကတည်းကတစ်ပါတည်းအသေထည့်သွင်း သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး
ပြောင်းလဲလို့လဲမရပါဘူးဒါ့အပြင် NIC တစ်ခု၏ MAC address သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအခြားမည်သည့် NIC တို့နှင့်မှမတူနိုင်ဘဲကိုယ်ပိုင်address ဖြစ်ပါတယ်။ network address (Logical address) ကိုတော့ network layer protocol တွေဖြစ်ကြတဲ့ IP/IPX တို့ကိုအသုံးပြုပြီးသတ်မှတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။internet protocol (IP) ကိုအသုံးပြုပြီးသတ်မှတ်ပေးတဲ့ Logical address သည် IP address ဖြစ်သည်။
ဥပမာအနေနှင့် ဆိုရ့င် Logical address (IP address) သည်လူတစ်ယောက် အမည် (ဥပမာ-မောင်မောင်)နှင့်တူပြီး MAC address တွေကတော့ ထိုသူ၏မှတ်ပုံတင်နံပါတ်(ဥပမာ-၁၂/ရပန(နိုင်)၁၂၃၄၅၆ )နှင့်တူပါသည်။ဤတွင်မှ ဆက်ဆိုရရင် ``မောင်မောင်Â´Â´ ဆိုတဲ့အမည်ဖြင့် တစ်နိုင်ငံလုံးတွင်လူများစွာရှိနေနိုင်သော်လည်း မှတ်ပုံတင်နံပါတ် ၁၂/ရပန(နိုင်)၁၂၃၄၅၆ သည် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းနှင့်သာသက်ဆိုင်မှာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် စာသင်ခန်းထဲမှာတော့ မောင်မောင်ဆိုသူသည်တစ်ယောက်ပဲ ရှိရပါမယ်။သို့မှသာ မောင်မောင်ရှိပါသလား ဆိုတဲကမေးခွန်းမျိုး
ကိုမေးတဲ့နေရာမှာ မှတ်ပုံတင်အမှတ်ကိုသုံးစရာမလိုဘဲ သက်ဆိုင်သူကဖြေကြားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Network layer protocol တွေသည် transport layer segment တွေမှာ source နှင့် destination address ထည့်သွင်းခြင်းများကို လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ထည့်သွင်းပေးမည့်လိပ်စာ နှစ်ခုလုံးသည် logical address များဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ
နေရာမှစ၍ data တွေသည် segment မှ packet များဖြစ်လာပါတယ်။ network layer protocol တွေသည် packet တွေကိုရည်ရွယ်ရာ destination သို့မပေးပို့ခင်ဘယ်လမ်းကြောင်း မှပေးပို့ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုလည်း
ဆုံးဖြတ်ပေးရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအမြန်ဆုံးရောက်ရှိနိုင်မယ့်လမ်းကြောင်း ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို routing လို့ခေါ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့် network တစ်ခုမှ အခြား network တစ်ခုသို့ပေးပို့တဲ့အခါမျိုးမှာ routing သည် လွန်စွာအရေး
ပါပါတယ်။ route လုပ်ပေးနိုင်သော protocol ပေါင်းများစွာရှိသော်လည်း internet protocol (IP) သည် အသုံးများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ web page ခေါ်ကြည့်တဲ့ဥပမာနှင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် IP သည် http request တစ်ခုအား ဘယ်ကလာပြီး ဘယ်ကိုသွားမယ်ဆိုတာကို ညွှန်ကြားခိုင်းစေသော protocol ဖြစ်ပါတယ်။
Hardware အနေနှင့်ပြောရရင် ဒီnetwork layer မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ device တွေကို layer-3 device တွေလို့ခေါ်ပါတယ်။ Router သည်အသုံးများဆုံး layer-3 device ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ Router အကြောင်းကို နောက်မှ အသေးစိတ်ပြန်ရှင်းပြပါ့မယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ Ye Aung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နီထွန်းဦး, သက်ပိုင်ဦး, နေမင်းဇွဲမာန်, falcon, naynayz, nyowin, thanehtunaung
18-01-2008, 10:08 PM
၆)	Data Link Layer
OSI model ၏ဒုတိယ layer ဖြစ်သော data link layer ရဲ့အဓိကလုပ်ဆောင်မှုကတော့ network layer ကလာတဲ့ packet တွေကို header နှင့် trailer တို့ထည့်သွင်းပြီး frame အဖြစ်သို့တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ header ထဲမှာဆိုရင်
Source နှင့် destination address တို့ကိုထည့်သွင်းပေးပါတယ်။ ဒီ layer မှာထည့်တဲ့ address တွေသည် MAC address (၀ါ) Physical address (၀ါ) hardware address ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်က network layer မှာတုန်းကတည်းက source နှင့် destination address တွေသည် Logical address (၀ါ) IP address ဖြစ်ပါတယ်။
Data link layer ကထည့်သွင်းသည့် MAC address နှင့်network layer က ထည့်သွင်းသည့် IP address တို့နှစ်ခုစလုံးမပါဘူးဆိုရင် packet တွေသည် ရည်ရွယ်ရာ ခရီးလမ်းဆုံးသို့ရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ IP address သည် packet တွေကို လက်ခံရယူမည့် ကွန်ပျူတာရှိရာ network သို့မှန်မှန်ကန်ကန် ရောက်ရှိရန်အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ frame အတွင်းမှာပါလာတဲ့ destination MAC address ကိုကြည့်ရှူ စစ်ဆေးကြပါတယ်။ destination MAC address သည်မိမိ၏
MAC address နှင့်တူနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ frame ကိုလက်ခံရယူပြီး network layer ကိုလွှဲပေးပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ များမတူဘူးဆိုရင် မိမိအတွက် မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိရှိပြီး ၎င်းframe ကိုလစ်လျူရှူလိုက်ပါလိမ့်မယ်။ဤနည်းဖြင့် data တွေသည် ရည်ရွယ်ရာခရီးလမ်းဆုံးသို့ရောက်နိုင်ကြပါတယ်။
ရောက်ရှိလာတဲ့frame တွေသည် error-frame ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာကိုစစ်ဆေးဖို့ရန် လက်ခံသည့်ကွန်ပျူတာမှာတာဝန်ရှိပါသည်။ဒါကြောင့် error detection လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလက်ခံသည့်ကွန်ပျူတာ၏ data link layer မှာပင်လုပ်ဆောင်ပါသည်။data တွေသည်ပေးပို့စဉ်ကအတိုင်းဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကို FCS check ဖြင့်စစ်ဆေးပါတယ်။အကယ်၍များလမ်းမှာ error ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ပို့ပေးရန် data link layer မှပင်ညွှန်ကြားပါလိမ့်မယ်။
နောက်ထပ်အရေးကြီး လုပ်ဆောင်မှုကတော့ collision ဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ရန် အချိန်တစ်ခုတွင် device တစ်ခုမှသာ transmit လုပ်နိုင်အောင် ထိန်းကျောင်းပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းနှစ်ခုကတော့ SCMA/CD နှင့် token passing တို့ဖြစ်ကြပါသည်။ Ethernet network တွေမှာ CSMA /CD ကိုအသုံးပြုပြီး token ring network တွေမှာတော့ token passing ကိုအသုံးပြုပါတယ်။
Hardware အနေနှင့်ပြောရရင် ဒီ Data Link layer မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့device တွေကို layer -2 device တွေလို့ခေါ်ပါတယ်။ bridge နှင့် switch တို့သည် အသုံးအများဆုံး layer-2 device များဘဲဖြစ်ပါတယ်။
Last edited by Ye Aung; 18-01-2008 at 10:11 PM..
နီထွန်းဦး, သက်တန့်, သက်ပိုင်ဦး, လေပြေညင်း, falcon, Ko-Naing, kokhing, naynayz, nyowin
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ ညီထွဋ် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဝင်းကျော်ဦး, သက်ပိုင်ဦး, naynayz, thanehtunaung
I appreciate it,Good explanation and good posts.thats Great!
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ yeakharr အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
26-01-2008, 03:11 PM
ကဲ ဒီတပတ်မှာတော့ဗျာ --ကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားမယ့် ခေါင်းစဉ်
အချို့ကို အနည်းငယ် တင်ပြလိုတယ်။ ပထမပိုင်းမှာတော့ နက်ဝပ် ကြားခံအသုံးပြုတဲ့ ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ ။Repeater ၊ Hub ၊ Switch တို့အကြောင်းနှင့်သူတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်တွေနဲ့နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဆွေးနွေးမှဖြစ်ပါတယ်။ နောက် တခုက Ethternet နဲ့ သူတို့ရဲ့ အဆင့်အတန်းတွေ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ယနေ့မှာဘယ်လို အဆင့်အတန်းမျိုးတွေကိုဘဲသုံးနေတယ်ဆိုတာတွေပေါ့။နောက်တပိုင်းမှာတော့ ကေ ဘယ် တွေအကြောင်း နက်ဝပ် ရယ်လို့စပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကတည်းက ဘယ်လိုကေဘယ်မျိုးကိုသုံး လာခဲ့တယ် ယနေ့တိုးတက်နေတဲ့မြန်နှုန်းမြင့် အင်တာနက် ခေတ်ကြီးမှာဘယ်လိုကေဘယ်တွေကို သုံးနေကြတယ်။ စသဖြင့် အကြောင်းအရာတော်တော်များများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တမ်းတော့ဗျာ--- ကျွန်တော်တို့တတွေက နည်းပညာခေတ် မှာမြန်နှုန်းမြင့်နှုန်းနဲ့ ကြားကနေ ဖြတ်လိုက်ရတော့ အခြေခံဆိုတာတွေကို မေ့နေတတ်ကြပါတယ်။ အခြေခံကိုသိမှ လဲနောက်လာမဲ့များစွာသောမျိုးဆက် သစ်တွေကိုမွေး ဖွားပေးနိုင်မှာပါ။ ကျွန်တော် ဆွေးနွေးသွားမှာကတော့ တကယ်ကို Networking ရဲ့ အခြေခံအကျဆုံးအပိုင်းတွေပါဘဲ ။ရှေ့မှာလဲတော်တော် များများ ကိုဆွေးနွေးပြီးပါပြီ။ နိဒါန်းပျိုးလိုက်တာပါ။
26-01-2008, 03:24 PM
Network Medium ကြားခံပစ္စည်းများအကြောင်း
Repeater ဆိုတာက cable ကိုအသုံးပြု၍ရနိုင်တဲ့ အရှည်ထက် ပိုမိုသွယ်တန်းလိုတဲ့အခါမျိုးတွေမှာကြားခံအသုံး
ပြုရတဲ့ device တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် coaxial cable ကို backbone အဖြစ်အသုံးပြုရတဲ့ network တွေမှာအသုံးများလာခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့အချိန်မှာတော့ အသုံးပြုမှုမရှိသလောက်နည်းပါးလာတဲ့ device အမျိုးအစားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ရူပဗေဒသဘောအရကြည့်မယ်ဆိုရင် ကြားခံmedium (ဥပမာ copper )တစ်ခုပေါ်မှာ ဖြတ်စီးနေသော လျှပ်စစ်စီးကြောင်း (current) သည်အကွာအဝေးတစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါ distortion ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒီသဘောပါဘဲ network cable တစ်ချောင်းပေါ်မှတဆင့် ပို့လွှတ်လိုက်တဲ့digital signal တွေသည်လည်း အကွာအဝေးတစ်ခုကိုကျော်လွန်သွားတဲ့အခါ ပုံသဏ္ဍာန်ယိုယွင်းသွားတတ်ပါတယ်။သို့သော်မူလ transmit လုပ်တဲ့ဆီကနေ ဘယ်နေရာလောက်ထိဆိုရင် signal တွေသည်များစွာယိုယွင်းမှု မရှိသေးပါဘူးလို့ အာမခံနိုင်တဲ့ အကွာအဝေး သတ်မှတ်ချက် အတိအကျရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ အသုံးပြုတဲ့ cable အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးကွာခြားချက်တွေရှိပါတယ်။ဥပမာ- thinnet coaxial ကို 185 m ထိ သွယ်တန်းနိုင်တယ်ဆိုတာမျို့ပေါ့ အကယ်၍များ 185 m ထက်ပိုတဲ့နေရာထိသွယ်တန်းဖို့လိုလာပြီဆိုရင်တော့ ကြားမှာ repeater ကိုအသုံးပြုဘို့လိုလာပါလိမ့်မယ်။
Repeater တို့ရဲ့အဓိကလုပ်ဆောင်မှုကတော့ တစ်ဖက်က၀င်လာတဲ့ signal တွေကိုမူလအခြေအနေတိုင်းပြန်
လည်ရောက်ရှိအောင် မြှင့်တင်ပြီးမှရှေ့ဆက် transmit လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုရရင်source တစ်ခုကနေ transmit လုပ်လိုက်တဲ့ signal တွေသည် 185 m အကွာဝေးရောက်တဲ့အခါအနည်းငယ်ယိုယွင်းလာပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါ repeater ကမူလအခြေအနေအတိုင်းပြန်လည်ရရှိအောင် repeat လုပ်ပြီး transmit လုပ်တဲ့အခါ နောက်ထပ် 185 m အကွာအဝေးကိုဆက်သွားနိုင်မယ်ပေါ့။
26-01-2008, 04:18 PM
Twisted pair cable ကိုအသုံးပြုတည်ဆောက်တဲ့ network တွေမှာဆိုရင်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးစီ(၀ါ) device တစ်ခုစီသည်ကိုယ်ပိုင် cable တစ်ချောင်းစီဖြင့်HUB ကိုဗဟိုထား၍ လာရောက်ချိတ်ဆက်ကြရပါတယ်။ coaxial cable ကိုသုံးတဲ့ network တွေမှာတော့ device အားလုံးတို့သည် တစ်ခုတည်းသော coaxial backbone ဆီသို့ချိတ်ဆက်တပ်ဆင်ကြရပါတယ်။ hub ကိုအသုံးပြုလာတဲ့အချိန်ကစပြီး INC connector vampire tap တို့ရဲ့ အခန်း ကဏ္ဍမှေးမှိန်ခဲ့ရပါတယ်။အောက်ဖော်ပြပါပုံသည် hub ၊ twisted pair တို့ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော networkနှင့် coaxial ကိုအသုံးပြုထားသော networkတို့ရဲ့ သရုပ်ဖော်ပုံများဘဲဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ဆောင်မှုအရကြည့်မယ်ဆိုရင် hub တွေသည် repeater နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဆိုရရင် OSI physical layer မှာအလုပ်လုပ်ကြတာခြင်းတူသလို ၀င်လာတဲ့ signal တွေကိုမူလအခြေအနေအတိုင်း ပြန်လည်ရရှိအောင် repeat လုပ်ပြီး transmit လုပ်ကြချင်း လည်းတူပါတယ်။ ဒါကြောင့် hub ကို port များစွာပါသော repeater (multi-port repeater လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။ ဟိုးယခင်တုန်းကတော့hub အသုံးပြုမှုလွန်စွာတွင်ကျယ်ခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့အချိန်မှာတော့ network performance ကိုပိုမိုတိုးမြှင့်စေရန် hub တို့၏နေရာတွင် switch တို့ဖြင့်အစားထိုးအသုံးပြုလာနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ hub ကိုအသုံးပြုမှုနှင့် network performance တို့ဘယ်လို ဆက်နွယ်သလဲဆိုတာကိုအနည်းငယ်ရှင်းပြလိုပါတယ်။ hub တစ်ခုသည် သူ၏ port တစ်ခုကနေ၀င်လာတဲ့ signal တွေကို ကျန်ရှိသမျှ port အားလုံးဆီတပြိုင်နက် forward လုပ်ပါတယ်။ ဥပမာ- port - ၈ခုပါတဲ့ 8- port hub ၏ port နံပါတ် 1 မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာကနေ transmit လုပ်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့။ ထိုအချိန်အတွင်းမှာ port2ကနေ port-8 အထိမှာ တပ်ဆင်ထားသမျှသော ကွန်ပျူတာအားလုံးတို့ကို transmit မလုပ်နိုင်အောင် တားမြစ်ထားပြီး ၀င်လာတဲ့ signal ကိုသာလက်ခံရယူနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။ တနည်းဆိုရရင် collision မဖြစ်အောင်အချိန်တစ်ခုတွင် ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှသာ transmit လုပ်နိုင်စေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ အချိန်တစ်ခုမှာ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှသာ transmit လုပ်နိုင်သည့် ဖြစ်စဉ်တွင်ပါဝင်နေသော network တစ်ခုအတွင်းရှိကွန်ပျူတာတွေသည် collision domain တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုရရင် 8 port hub မှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာ ၈ လုံးသည် collision domain တစ်ခုကိုကိုယ်စားပြုသည်။
ဒါဆိုရင် 24 â€“port hub လေးလုံးကို cascade ချိတ်ဆက်ပြီး port အရေအတွက်ည96 ခုထိပါရှိတဲ့ network တစ်ခုမှာ collision domain ဘယ်နှခုရှိသလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ရအောင် အောက်ဖော်ပြပါပုံ ကတော့ 24 port လေးခုကို cascade ချိတ်ဆက်ထားပုံဖြစ်ပါတယ်။
Port အရေအတွက် စုစုပေါင်း ၉၆ ခုရှိသော်လည်း ကွန်ပျူတာချိတ်ဆက် တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်သည့် port သည် ၉၀ သာ ရှိလိမ့်မယ်။ ၆ ခုကcascade ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် အသုံးပြုကြရပါတယ်။ သဘောကတော့ကွန်ပျူတာ အလုံး ၉၀ ပါရှိတဲ့ network ပေါ့။
Hub တို့သဘာဝအတိုင်း port တစ်ခုကနေ၀င်လာတဲ့ signal ကိုကျန် port များအားလုံးဆီဖြန့်ဝေပေးပို့သည့်အတွက် မည်သည့် hub ၏ port တစ်ခုကနေမဆို transmit လုပ်တိုင်းကျန်hub နှင့် port များအားလုံးဆီသို့ရောက်ရှိကြပါတယ်။ ဖော်ပြပါပုံ အရဆိုရင်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးက transmit လုပ်နေချိန်တွင်ကျန်ကွန်ပျူတာ ၈၉ လုံးတို့သည် transmit မလုပ်နိုင်ဘဲ ၀င်လာသည် signal ကျစောင့်ဆိုင်းလက်ခံကြရပါတယ်။
ဒါကြောင့် မည်သို့ပင် ကွန်ပျူတာတွေ hub တွေများနေစေကာမူ အချိန်တစ်ခုတွင် ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးမှသာ transmit လုပ်နိုင်ကြသည့်အတွက် ၎င်းကွန်ပျူတာအလုံး ၉၀ တို့သည် collision domain တစ်ခုတည်းသာဖြစ်တယ်။
ဒီနေရာမှာ သိထားဘို့ရန်အရေးကြီးလာတာက collision domain တစ်ခုတည်းအောက်မှာရှိသော ကွန်ပျူတာတွေသည် transmit လုပ်တဲ့နေရာမှာ network bandwidth ကိုမျှဝေသုံးစွဲရတယ်ဆိုတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် collision domain တစ်ခုမှာ transmit လုပ်လိုတဲ့ကွန်ပျူတာအရေအတွက်များလာတာနှင့် အမျှကွန်ပျူတာတစ်လုံးအတွက် ရရှိမည့် bandwidth ကိုယ်တာလျော့နည်းလာပါလိမ့်မယ်။ bandwidth ကိုမျှဝေသုံးစွဲခြင်းသည် 8 port hub တစ်ခုလောက်သာအသုံးပြုတဲ့သာမန် network ငယ်တွေမှာ မသိသာပေမယ့် ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဥပမာလိုမျိုး hub လေးခုလောက်ကို cascade ချိတ်ပြီးကွန်ပျူတာများစွာဖြင့်တည်ဆောက်ထားတဲ့ network တွေမှာတော့ network speed သည်အတော်လေးကိုသိသာလှပါတယ်။
ဥပမာ-ကွန်ပျူတာ ၉၀ ပါတဲ့ network သည် 100 mbps ဖြင့်လုပ်ဆောင်တဲ့ fast Ethernet network ဆိုပါတော့ အကယ်၍ များတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ၎င်း ကွန်ပျူတာ ၉၀ စလုံးမှ transmit လုပ်ဖို့ရှိလာပြီဆိုရင် ကွန်ပျူတာတစ်လုံးအတွက်ရရှိလာမည့် bandwidth ကိုယ်တာသည် အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
Bandwidth available = 100mbps/90 = 1.1 mbps
ဒါကအဆုံးစွန်ဆုံးအခြေအနေထိတွက်ပြီးပြောတာပါ။ တကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ အချိန်တစ်ခုတည်းအတွင်းမှာကွန်ပျူတာအားလုံးတစ်ပြိုင်နက် transmit လုပ်ဖို့ရန်ရှိကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်ငြားလည်း hub အသုံးပြုထားသော network အတွင်းရှိကွန်ပျူတာအရေအတွက် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က transmit လုပ်ဖို့ရန်ရှိလာပြီဆိုရင်တောင်မှ အတော်လေးနှေးလာတာကိုကြုံရတတ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ဖြတ်ပြီးပြောချင်တာက collision domain အကြောင်းပါဘဲ ။ hub ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် သူ့အကြောင်းကိုသိဘို့လိုလာပါတယ်။
30-01-2008, 09:16 PM
တည်နေရာ: inalittle room
ပို့စ် 26 ခုအတွက် 66 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အကိုရေ ကျွန်တော် တခု လောက်မေးချင်လို့ ပါ၊၊
အင်တာနက် စပိဒ် က ဘယ်လောက်ကအမြင့်ဆုံးလဲ
ဲပုံမှန်ဆိုရင် ကျွန်တော့်ဆီမှာ ၅၄mbp ရှိတယ်
အဲဒါ မြန်တယ်ခေါင်္ံရမလား နှေးတယ်ခေါင်္ံရမလား
ယိုင်ယာလက်စ် သုံးလို့ ဘဲလား
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ htweko အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by htweko
30-01-2008, 11:19 PM
Technology of connections Maximum Speed
Telephone Communication Line	56 Kbps
ISDN	128 Kbps
Television Cable	36 Mbps
ADSL21 Mbps (request) 10Mbps (reply)
Wireless (radio)	To 54 Mbps
T3	4474 Mbps
GSM-data	9,6 Kbps
GPRS	160 Kbps
UMTS	2048 Mbps
အဲ့ဒါတွေကတော့ ကျွန်တော်သိထားတဲ့ အင်တာနက် speed တွေဖြစ်ပါတယ်။ အမြန်ဆုံးကတော့ T3 ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အကိုပြောတဲ့ 54 Mbps ဆိုတာက maximum data rate ဖြစ်ပါတယ်။ Ethernet standard အရ 802.11 g ရဲ့သီအိုရီအရ ဒီလောက် speed ရအောင်ထုတ်ထားပေမယ့် တကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ data rate သည် 20 နှင့် 25 ကြားရရှိနိုင်ပါတယ်။ bandwidth နဲ့ အင်တာနက် အမြန်နှုန်းနဲ့မတူပါဘူး။ တကယ်တော့ အကိုပြောတဲ့ ၀ိုင်ယာလက် ဟာ data rate 54 Mbps လို့ဆိုပေမယ့် အင်တာနက်အမြန်နှုန်းကျတော့ 64 Kbps လောက်သာသွားပါတယ်။
31-01-2008, 02:08 AM
ပြန်စာ -ွန်ပျူတာမှသည်ကွန်ရက်ဆီသို့
အဲ့ဒါတွေကတော့ ကျွန်တော်သိထားတဲ့ အင်တာနက် speed တွေဖြစ်ပါတယ်။ အမြန်ဆုံးကတော့ T3 ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အကိုပြောတဲ့ 54 Mbps ဆိုတာက maximum data rate ဖြစ်ပါတယ်။ Ethernet standard အရ 802.11 g ရဲ့သီအိုရီအရ ဒီလောက် speed ရအောင်ထုတ်ထားပေမယ့် တကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ data rate သည် 20 နှင့် 25 ကြားရရှိနိုင်ပါတယ်။ bandwidth နဲ့ အင်တာနက် အမြန်နှုန်းနဲ့မတူပါဘူး။ တကယ်တော့ အကိုပြောတဲ့ ၀ိုင်ယာလက် ဟာ data rate 54 Mbps လို့ဆိုပေမယ့် အင်တာနက်အမြန်နှုန်းကျတော့ 64 Kbps လောက်သာသွားပါတယ်။[/quote]
15-02-2008, 03:08 AM
thz for ur posts...
ဟုတ်ကဲ့ပါ ကျွန်တော်ကိုအခုလိုလာပြောတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ နောက်တခုက ကျွန်တော် ၀ိုင်ယာလက် စတန်းဒတ် တွေကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ စာရိုက်ရတာညောင်းတယ်လို့ သဘောမထားဘဲ ကျွန်တော်က အားလုံးကို စေတနာ ထားပါတယ်။ မြန်မာမိသားစု ဖိုရမ်သည် ရှုထောင့်မျိုးစုံ ကနေ ရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်အောင် အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် တကယ် သုတရတနာသို့ သဖွယ် ဖြစ်အောင် ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ကိုယ်သိတာကိုယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဘာသာ ရပ် တွေ ကို ရေးသားကြမယ် ဆွေးနွေးကြမယ်ဆိုရင်တော့ -----အားလုံးအတွက်အင်မတန်မှကောင်းပြီးနောင်လာနောက်သားတွေအတွက် လည်း အကျိုးရှိတာပေါ့ဗျာ။ ကဲ ဆက်လက် လေ့လာဆွေးနွေးကြရအောင်။ နက်ဝပ်ကီးနဲပတ်သက်လို့လည်း အချိန်မရွေးမေးနိုင်ပါတယ်။ကူညီဘိ်ု့လဲအသင့်ပါဘဲ။
15-02-2008, 05:58 PM
Wireless နှင့်ပတ်သက်သောပထမဆုံး standard ကို 1997 တွင် IEEE မှ အတည်ပြုသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ မူလ Wireless standard ကတော့ 802.11 ပဲဖြစ်ပါတယ်။ 802.11 ရယ်လို့စတင်စဉ်က bandwidth သည် 2Mbps သာ ရှပြီး အသုံးပြုသော frequency မှာ 2.4 GHz ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီကာလနောက်ပိုင်း wireless နည်းပညာတွေပိုမို ဖွံဖြိုးလားခြင်းနှင့်အတူ standard သစ်များစွာ ထပ်မံထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့ အသုံးအများဆုံး 802.11 standard သုံးမျိုးရှိပါတယ်။
802.11a သည် အခြား standard ၂ခု ဖြစ်တဲ့ 802.11b၊ 802.11g တို့နှင့်မတူဘဲ တမူကွဲပါသည်။ အဓိကမတူတဲ့အချက် က frequency ဖြစ်ပါတယ်။ 802.11b နှင့် 802.11g တို့သည် 2.4GHz ကိုအသုံးပြုပြီး 802.11a ကတော့5GHz ကိုအသုံးပြုလုပ်ဆောင်ပါတယ်။ frequency မြင့်ခြင်းရဲ့အားသာချက်ကတော့ 802.11a standard အသုံးပြုထားတဲ့ network တွေသည် မိုက္ကရိုဝေ့မီးဖို၊ လက်ကိုင်ဖုန်း မော်တာအစရှိတဲ့ ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်းတို့၏ နှောက်ယှက်ခြင်းများရဲ့ ဒဏ်ကို အခြား 802.11b ၊ 802.11g တို့လောက်မခံရပါဘူး ဒါပေမယ့် highe frequency ကို transmit လုပ်ဖို့ရန် ပါဝါသုံးရခြင်းနှင့် lower frequency (2.4 GHz) တွေလောက် ဝေးဝေးသို့ transmit မလုပ်နိုင်ခြင်းစတဲ့ အားနည်းချက်တွေလည်းရှိပါတယ်။ 802.11a အင်တီနာ သည် 20m( 66 ပေ) ထိသာ transmit လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သဘော ကကွန်ပျူတာနှင့် WAP တို့သည် 20 m အတွင်းသာရှိရမယ်ဆိုတကာကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။သီအိုရီအရ 802.11a ၏ maximum data rate သည် 54 Mbps ဖြစ်ပြီး တကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ 11 Mbps မှ 18 Mbps အတွင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
802.11b ကို IEEE မှ 1999 တွင်အတည်ပြုသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းstandard ကို wifi(wire less fidelity) ဟုလည်းလူသိများပါတယ်။ အသုံးပြုသော frequency မှာ မူလ 802.11 standard အတိုင်း 2.4 GHz ဖြစ်ပါတယ်။ maximum data rate သည် သီအိုရီအရ 11 Mbps ရှိပါတယ်။ဒါပေမယ့်တကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ 5Mbps ၀န်းကျင် ခန့်သာရရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါတောင်မှ ထို data rate ကိုရရှိရန် ကွန်ပျူတာနှင့် WAP တို့ အကွာအဝေးသည် 30 m(100ft) အတွင်းရှိဖို့လိုပါတယ်။
802.11g သည်သီအိုရီအရ maximum data rate ကို 54 Mbps အထိရအောင်ပုံစံထုတ်ထားသော 802.11b လို့တောင်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ တကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ data rate သည် 20 နှင့် 25 Mbps ကြားရရှိနိုင်ပါတယ်။ 802.11b လို့တောင်ဆိုနိုင်ပါတယ်။တကယ်လက်တွေ့မှာတော့data rate သည် 20 နှင့် 25 Mbps ကြားရရှိနိုင်ပါတယ်။ 802.11b ကဲ့သို့ပင် 2.4 GHz ကိုအသုံးပြုပြီး အင်တီနာ၏ geographic range သည်လည်း 30 m ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ data rate မြင့်ရုံသာမက 802.11b network တို့မှာလည်း တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည့်အတွက်လူသုံးများပါတယ်။ဆိုရရင် 802.11b WAP အသုံးပြုထားတဲ့ network မှာ 802.11g NIC တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ Ye Aung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခင်မေခ, azp09, KoBaKhat, thet khaing
Originally Posted by Ye Aung
ကိုရဲအောင် .. မေးစရာတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။
25-02-2008, 03:35 AM
ကို ရဲအောင်ရဲ့ အီးမေးလ်လေးသိချင် လို့ပါ အစ်ကို.......
Find More Posts by kphyo
ပို့စ် 60 ခုအတွက် 156 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Originally Posted by kphyo
သင်ယူခွင့်ရှိတဲ့ ဘ၀မှာ ပျော်ရွှင်မိတယ်..ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်
Find More Posts by ကောင်စုတ်လေး
25-02-2008, 04:48 PM
အကို ရဲအောင် [YE Aung ] ရေကျေးဇူးပဲနော်...........................................................................အခုလိုလေ့လာခွင့်ရတာကို.......
26-02-2008, 03:31 AM
ကျေးဇူးပဲ အစ်ကိုရဲအောင်....ကျွန်တော် အင်ဗိုက် လုပ်ထားတယ် အစ်ကို...
Congratulation for your information.
Find More Posts by tunmyatkhine
21-04-2008, 03:14 AM
အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်......အားရကျေနပ်မိပါတယ်........နောက်လဲအကျိုးရှိတဲ့စာသားတွေထပ်တင်ပေးပါဦး။ နောက်တင်မယ့် ဟာတွေကို စောင့်မျှော်နေပါတယ်။
Find More Posts by နန္ဒ
21-04-2008, 02:10 PM
ကျွန်တော် အကြမ်းရေးပြီးသားတွေရှိနေပါတယ်။ အခု ကျွန်တော် တို့ ကွန်ပျူတာနှင့်အခြား ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာစာအုပ်များ ကိုဖရီးရနိုင်မဲ့ ကျွန်တော်သိသမျှသော ဆိုက်တွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဆိုက်တစ်ခုကို ပြောပြချင်တယ်။ သူကတော့ ရက်ပစ်ရှဲလ် လင့်နဲ့ပါ။ တကယ်လို့ များ ဒေါင်းလုပ်ချရတာအဆင်မပြေရင်ပြောပါ။ ကျွန်တော်ချပြီးပြန်တင်ပေးပါ့မယ်။ လင့်လေးတော့ပေးပေါ့ဗျာ။ စာအုပ်တော်တော်များများ ပေါ့ နက်ဝပ်ကီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်တွေကိုတော့ကျွန်တော် ချပြီးသွားပြီ။ နဲနဲကျန်နေသေးတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေအောင် ၀မ်းသာအားရပြောပြတာပါ။
သူလဲပဲ အက်ဒမင်စာအုပ်ပါဘဲ သူက တော့ အထွေထွေပေါ့ အပေါ်က ဟာကတော့ ဆာဗာကိုးလ်ပါ
Last edited by tu tu; 06-09-2008 at 08:39 PM..
networking ebooks, networking faqs, networking guide, networking howto, networking knowledge